Gaarsiinta baabuurkii ugu horreeyey ee Cummins ku shaqeeya Kiraynta Gawaarida Penske oo ay xuseen Baabuurta Xino
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Gaarsiinta baabuurkii ugu horreeyey ee Cummins ku shaqeeya Kiraynta Gawaarida Penske oo ay xuseen Baabuurta Xino
Horraantii sannadkan, Hino waxay ku dhawaaqday inay damacsan yihiin inay soo saaraan baabuur Hino ah oo dhexdhexaad ah iyo kuwo culus oo wata matoorada Cummins oo lagu iibiyo Waqooyiga Ameerika dhammaadka 2021. Bishan, Hino wuxuu gaarsiiyay kii ugu horreeyay baabuurtan Penske Truck Leasing xaflad ka dhacday geedka ku yaal Ceelasha Macdanta, WV sida bilowga wax -soo -saarka oo kor u kacaya.
“Waxaan albaabada u furnay xarunteenna cusub ee wax -soo -saarka ee Macdanta Wells dhowr sano ka hor si aan u taageerno baahida kordhaysa iyo habaynta badeecadaha. Maanta, waxaan awoodnaa inaan ka faa'ideysanno kartida wax-soo-saarkan casriga ah si aan u noqonno mid hal-abuur leh oo dabooli kara baahida macaamiisheena. Waa wax lagu farxo in la arko kii ugu horreeyey ee hal-abuurnimada noocaas ah taga Penske Truck Leasing oo muddo dheer shuraako ku ahaa Hino Trucks.
Xubno ka tirsan Baabuurta Hino iyo Cummins ayaa goobta joogay markii ay guddoonsiinayeen Paul Rosa, Madaxweyne Ku -xigeenka Sare ee Iibsiga iyo Qorshaynta Fleet ee Kiraynta Baabuurka Penske, oo leh furaha gaadhiga koowaad.
“Xiriir soo jireen ah ayaan la leenahay Hino waxayna ahaayeen kuwo alaab-qeybiyeyaal lagu kalsoonaan karo ku iibiya baabuur tayo sare leh oo ku dhex jira kireysiga xamuulka iyo maraakiibta kirada gawaarida muddo ka badan labaatan sano. Waxaan rajeyneynaa inaan ku darno gawaaridan doonteenna waxaanan sii wadnaa inaan ka mahadcelinno taageerada aadka u wanaagsan ee ay Hino bixiso, ”ayay tiri Rosa.
Amy Boerger, Madaxweyne Ku -xigeenka Cummins iyo Maareeyaha Guud, Waqooyiga Ameerika ee Jidka Weyn. "Waxaan jeclaan lahayn inaan ugu hambalyeynno Hino Trucks bilowga wax -soo -saarka, iyo Penske Truck Leasing markii ay la wareegeen Hino L Taxanaha ugu horreeyay oo ay ku shaqeyneyso Cummins."
Gaadhiga xamuulka ah ee la keenay waa 22MY L Series, oo ku shaqeeya mashiinka Cummins B6.7 wuxuuna qayb ka yahay safka Hino ee Class 6 & 7 baabuurta caadiga ah ee leh sumcadda warshadaha siinta qiimaha ugu hooseeya ee lahaanshaha fasalkeeda iyo nabadgelyo cusub Astaamaha. Hino Trucks ayaa dhowaan la siiyay Abaalmarinta Qiimaha Digest ee ugu qiimaha saraysa ee loogu tartamayo Baabuurta Waaweyn ee Dhexdhexaadka ah ee aadka loo tartamo oo leh Qaybta Cab & Chassis ee caadiga ah. Taxanaha L ee Hino ayaa sidoo kale leh dhammaan hababka badbaadada oo ay ku jiraan Xakamaynta Degganaanshaha Elektiroonigga ah (ESC), Digniinta Bixitaanka Lane (LDW), Kantaroolka Firfircoon ee firfircoon (ACC) iyo dareeraha suunka suunka darawalka si loo ilaaliyo macaamiisha mayl mayl ka dib.